आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन ७ गते शनिबार,तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १८ तारिख – प्रजातन्त्र दिबश, अष्टमीब्रत, फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी « Light Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन ७ गते शनिबार,तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १८ तारिख – प्रजातन्त्र दिबश, अष्टमीब्रत, फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी
आज श्री शाके १९३८, वि.सं. २०७३ साल फागुन ७ गते शनिबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १८ तारिख, प्रजातन्त्र दिबश, अष्टमीब्रत, फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी, ११:२५ बजे सम्म पश्ताच अष्टमी तिथी चन्द्रमा तुला राशिमा १२:२० बजे सम्म पश्चात बृश्चिक राशिमा सूर्य उत्तरायण शिशिर अष्टमीब्रत (ज्यो. प. सरोज घिमिरे / लाइटनेपाल डटकम )
आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । तपाईको बोलिको कारण आफन्तजन हरु रुष्ट रहन सक्नेछन । नजिकका ब्यक्तिहरु बाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ ।
प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला ।
सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ । तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रु सबल रहनेछन् । नयाँ लगानीको क्षेत्रमा बिशेष होस पुर्याउनु होला । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ ।
पठनपाठनको क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । आफु निर्णय गर्न नसक्ने अनि अरुको भर पर्ने बानिले सामान्य झन्भट आईपर्ला । खानपानको कारण स्वास्थमान्य गडबढि रहनसक्छ । सामान्य खर्च हुन सक्छ ।
पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । तपाईको मान सम्मानमा सामान्य आघात पुग्नेछ । पारिबारीक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ ।
प्रतिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । काम कार्यकोक्षेत्र सबल रहला । मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोगले भाग्योदयको योग रहेकोछ । मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्रका सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ । परीश्रमको अनुरुपको राम्रो फल प्राप्त होला ।
रचनात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानको गडबढिले स्वास्थमा सामान्य असर रहला । सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन् । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ
आँट शाहसको बृद्यिहुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा भने सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । दाम्पत्य शुखमा बाधा पर्न सक्छ । मातृ पक्षमा कसैको स्वास्थमा सामान्य असर रहला । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । सामान्य क्रोधको सामना गर्नु पर्ला
नेत्र सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सौदर्यका क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । अनावश्क यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मित्र वा दाजुभाई बिच मनमुटाब हुन सक्छ ।
आक्समिक धनलाभको सम्भाबना रहेकोछ । टाढाको यात्रा आम्दानि मुलक रहन सक्छ । कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । आटशाहसमा बृद्यिहुने छ ।
पर्नेछ ।सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र परिश्रम खर्चिनु पर्ने छ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ । सभा सम्मेलनमा सहभागीता मिल्नेछ
यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला । मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निँित सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । आटँ शाहसमा कमि आउनेछ ।
बाबुले घाँटी रेटेर आमाको हत्या गरि प्रहरी चौकीमा आत्मसमर्पण गरे, अहिले तीन महिने छोरीसहित उनका सातजना केटाकेटीको बिचल्ली नेपालगन्जमा वडाध्यक्षमाथि सांघातिक आक्रमण, स्थिति चिन्ताजनक भएपछि भारतको लखनउ लैजाने तयारी नेविसंघ र अखिल बीचको झगडाले लियो उग्र रुप, झडपमा प्रहरीको एकतर्फी दमन, काठमाण्डौ इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष पुर्ण बहादुर खड्का सहित ९ जना विद्यार्थी गम्भीर घाईते रुद्र चलचित्रका २ नायकले पत्रकारलाईनै यसो भनेपछि (भिडियोमा हेर्नुहोला ) हस्तक्षेप गर्न सेना र पूर्वराजालाई ‘अस्थायी शिक्षक’को आमन्त्रण (बिन्तीपत्रसहित) गोसाइँकुण्ड पुराण, इतिहास र वर्तमान : नेपाल अंग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धि नेपालको हितमा नभएको भन्दै छट्पटिन पुगेका अमरसिंह थापाले गोसाइँस्थानमा देह त्याग गरेका थिए लोडसेडिङ नेपालमा हुदैन, अब ‘सम्झौता भए अनुसार समयसिमाभित्रै काम गर्न सकेन भने हामी सम्झौता तत्काल खारेज गर्छौं – ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (भिडियोसहित) भोलि साउन १३ गते : यसकारण एकै दिन नागपञ्चमी, उपाकर्म, ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र राखी गाइ मार्न सिकाउने तिमी हौ भन्दै माओबादी नेता हरु लाई एक युवाले गित मार्फत दरो झटारो हाने भिडियो सहित पुर्नजन्म :- ४ वर्षको बच्चालाई याद छ आफनो पुर्वजन्मका कुराहरु , ११ वर्ष पहिल्यै भएको थियो मृत्यु, बोल्न सुरु गरेपछि लिन थाले गाउँको नाम हाम्रो टिम